Dhammaan buugaagta Adobe Flash ee ku qoran Isbaanishka + Ebook Bilaashka ah (UNED) | Abuurista khadka tooska ah
Dhammaan buugaagta Adobe Flash ee ku qoran Isbaanishka + Ebook Bilaashka ah (UNED)
Adobe Flash waxay wada jir u yihiin Sawirqaade iyo Photoshop mid ka mid ah saddexda madax ee muuqda ee guriga. Loo sameeyay loona soo saaray khalkhal galinta, jiilka iyo daaweynta muuqaalada vektorka, waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan ku shaqeyno koodh adoo adeegsanaya luuqada 'Actionscript'. Ujeeddadeeda aasaasiga ah iyo waxa ay kaga duwan tahay labadeeda walaalaha ah ee waayeelka ah ayaa ah in loo sameeyay in lagu bixiyo nuxurka is-dhexgalka ee wax soo saarka iyo warbaahinta kala duwan. Marka la soo koobo, waa istuudiyaha isboortiga oo ku shaqeeya shaashadda dulinka, sawir gacmeedyada 'raster,' codka, lambarka waqtiga iyo socodka fiidiyaha. Caannimadeedu waxay gaadhay heer noocan oo kale ah oo maanta aynu ognahay dhaqdhaqaaqyada websaydhka sida animations flash, laakiin sidaan soo sheegnay wuxuu u shaqeeyaa mashaariic warbaahin kala duwan iyo meelaha la tagayo sida ciyaartoyda fiidiyoowga ah.
Marka xigta waan ku soo bandhigayaa Buugyaraha Adobe Flash ee Isbaanishka ku qoran iyo laga soo bilaabo nooca CS3 illaa kan hadda loo yaqaan 'CC version' (oo, sidaad ogtahay, sidoo kale u shaqeeya nooca CS6). Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale kuu soo qaatay ebook aad u qani ah oo qoto dheer oo ku saabsan arjiga ay soo saartay Jaamacadda Masaafada Qaranka. Buuggu wuxuu ina tusayaa arjiga qaybtiisa 8aad wuxuuna ku saabsanyahay in kabadan 300 bog talooyin iyo farsamooyin kaladuwan oo loogu talagalay soosaarida sawirada, xayeysiinta webka, animations, hanashada jawiga shaqada ama kaaliyaha qoraalka. Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysan doonto qalabkan!
Adobe Flash nooca CS3 buugga (http://help.adobe.com/archive/es_ES/flash/cs3/flash_cs3_help.pdf)
Adobe Flash nooca CS4 buugga (http://help.adobe.com/archive/es_ES/flash/cs4/flash_cs4_help.pdf)
Adobe Flash nooca CS5 buugga (http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/flash_cs5_help.pdf)
Adobe Flash nooca CS6 iyo buuga CC (https://helpx.adobe.com/es/pdf/flash_reference.pdf)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Dhammaan buugaagta Adobe Flash ee ku qoran Isbaanishka + Ebook Bilaashka ah (UNED)
Ma soo dejisan karo buugga flash cc
Ku jawaab mauriciocubillos
8 nooc oo naqshadeeyayaasha garaafka ah: Maxaad jeceshahay?
30 Barnaamijyo Xiiso Badan oo Shakhsiyaad caan ah